DataRobot: Mashruuc Barasho Mashiinka Qalabaynta | Martech Zone
Sannado ka hor, waa inaan ku sameeyo falanqeyn maaliyadeed weyn shirkadayda si aan u saadaaliyo in mushahar kordhintu ay yareyn karto culeyska shaqaalaha, kharashaadka tababarka, wax soo saarka, iyo guud ahaan akhlaaqda shaqaalaha. Waxaan xasuustaa inaan ordo oo aan tijaabiyo moodooyin badan usbuucyo, dhammaantoodna waxaan ku soo gabagabeynayaa inay jiri laheyd keyd. Agaasimahaygu wuxuu ahaa nin layaableh wuxuuna iga codsaday inaan dib ugu noqdo oo aan iyaga u hubiyo mar kale ka hor intaanan go'aansan inaan mushahar ka jaro dhawr boqol oo shaqaale ah. Waan soo noqday oo lambarada ayaan mar labaad orday… isla natiijooyinkaas.
Waxaan ku dhex maray Agaasimahayga moodooyinka. Kor buu u eegay oo weydiiyey, “Miyaad ku khamaami lahayd shaqadaada tan?” Was wuu dhab ahaa. "Haa." Waxaan markii dambe kor u qaadnay mushaarka ugu yar ee shaqaalaheena iyo kaydinta kharashka oo labanlaabmay sanadka dhexdiisa. Moodooyinkeygu waxay saadaaliyeen jawaabta saxda ah, laakiin waxay ahaayeen kuwo ka baxsan saameynta guud. Waqtigaas, taasi waxay ahayd tan ugu wanaagsan ee aan qaban karo marka la siiyo Microsoft Access iyo Excel.
Haddaan heli lahaa awoodda xisaabinta iyo awooda barashada mashiinka maanta, waxaan kuheli lahaa jawaab ilbiriqsiyo, iyo saadaalin sax ah oo ku saabsan kaydinta kharashka oo qalad yar kujira. XogtaRobot noqon lahaa wax ka yar mucjiso.
DataRobot waxay shaqeysiineysaa dhammaan meertada nololeed, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay si dhakhso leh oo fudud u dhisaan moodello saadaalin heer sare ah leh. Maaddooyinka kaliya ee loo baahan yahay waa xiisaha iyo xogta - codeynta iyo xirfadaha barashada mashiinka ayaa gebi ahaanba ikhtiyaar ah!
DataRobot waa barxad loogu talagalay Tababbarka Sayniska Xogta, Falanqeeyayaasha Ganacsiga, Saynisyahannada Xogta, Maamulayaasha, Injineerrada Software-ka, iyo Xirfadleyda IT si loo abuuro, loo tijaabiyo, loona hagaajiyo moodellada xogta si deg deg ah oo fudud. Waa kan muuqaalka muuqaalka guud:
Nidaamka loogu talagalay isticmaalka DataRobot waa mid fudud:
Xulo doorsoomaha bartilmaameedka
Ku dhis boqolaal moodel hal guji
Baadh moodooyinka ugu sarreeya oo arag fikrado
U dir qaabka ugu fiican oo saadaalin samee
Sida laga soo xigtay DataRobot, Faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah:
saxnaanta - In kasta oo otomatiga iyo xawaaruhu badanaa ku yimaadaan kharash tayo leh, haddana DataRobot waxay si gaar ah u gaarsiisaa dhammaan dhinacyadaas. DataRobot waxay si otomaatig ah u baareysaa malaayiin isku-dhafan oo algorithms ah, tallaabooyinka horay loo sii wado xogta, isbeddelada, astaamaha, iyo cabbiraadda qaabeynta qaabka ugu wanaagsan ee mashiinka barashada xogtaada. Moodel kasta waa mid gaar ah - oo si fiican loogu hagaajiyay xog gaar ah iyo bartilmaameedka saadaasha.
Speed - DataRobot wuxuu soo bandhigayaa mashiin mashiin ah oo si isbarbar yaacsan leh u rogi kara boqolaal ama xitaa kumanaan server oo awood leh si loo sahamiyo, loo dhiso loona habeeyo moodooyinka wax lagu barto mashiinka. Xog-ururin ballaaran? Xog ururin ballaaran? Dhib malahan. Xawaaraha iyo qiyaasta qaabeynta waxaa ku xaddidan oo keliya ilaha xisaabinta ee qashinka DataRobot. Awoodan oo dhan, shaqadii bilaha qaadan jirtay hadda waxay ku dhammaatay saacado gudahood.
Adeegsiga Fudud - Isdhexgalka ku saleysan websaydhka dareenka leh wuxuu u oggolaanayaa qof walba inuu la falgalo barxad aad u xoog badan, iyadoon loo eegin heerka xirfadeed iyo khibradda barashada mashiinka. Isticmaalayaashu way jiidi karaan oo hoos u dhigi karaan ka dibna u oggolaan karaan inay DataRobot shaqada oo dhan qabtaan ama waxay qori karaan tusaalayaal u gaar ah oo ay ku qiimeynayaan barxadda. Sawirada la dhisay, sida Model X-Ray iyo Muuqaalka Saameynta, waxay bixiyaan fikradaha ugu qoto dheer iyo faham cusub oo ku saabsan ganacsigaaga.
Nidaamka deegaanka - La socoshada nidaamka deegaanka ee sii kordhaya ee algorithms-ka barashada mashiinka waligiis sidan uma sahlaneyn. DataRobot waxay si joogto ah u ballaarineysaa noocyadeeda kala duwan, algorithms-ka ugu fiican fasalka ee laga helo R, Python, H20, Spark, iyo ilo kale, iyadoo siineysa dadka isticmaala habka falanqaynta ee ugu wanaagsan caqabadaha saadaalinta. Gujinta fudud ee badhanka Bilowga, isticmaaleyaashu waxay geyn karaan farsamooyin aysan waligood horay u isticmaali jirin ama xitaa aqoon uma lahaan karaan.
Gelinta Degdega ah - Moodooyinka ugu fiican ee la saadaalin karo wax yar ma leh qiime urur haddii aysan si dhakhso leh uga dhex shaqeynin ganacsiga dhexdiisa. Iyadoo la adeegsanayo DataRobot, qaabab u dirista saadaalinta waxaa lagu sameyn karaa dhowr jiir-yare. Intaas oo kaliya maahan, qaab kasta oo ay dhisto DataRobot wuxuu daabacaa dhamaadka REST API, taasoo ka dhigeysa neecaw la dhexgaliyo barnaamijyada casriga ah ee shirkadaha. Ururradu hadda waxay kaheli karaan qiimaha ganacsiga mashiinka barashada daqiiqado gudahood, halkii ay ka sugi lahaayeen bilooyin inay qoraan koodhka dhibcaha oo ay wax ka qabtaan kaabayaasha aasaasiga ah.
Fasalka Ganacsiga - Hadda barashada mashiinka waxay saameyn ku yeelaneysaa tirada sii kordheysa ee howlaha ganacsiga, mar dambe ikhtiyaar uma ahan in loola dhaqmo sidii qalab horumariyaha oo leh nabadgelyo, qarsoodi iyo ilaalin joogto ah oo ganacsi. Xaqiiqdii, waa muhiim in barxad lagu dhiso oo la geeyo moodooyinka ay adkaato, lagu kalsoonaan karo oo si wanaagsan ugu dhex milmi karto nidaamka deegaanka ee teknoolojiyada dhexdeeda urur.
Jadwal Jadwalka Tooska ah ee Xogta Dahsoon
Tags: aisirdoonka macmalbarashada mashiinka otomaatiga ahcunista xogtaxogta ka horeysasayniska xogtamuuqaalada xogtadatarobotdatasetssaamaynta muuqaalkah2odatasets waaweynbarashada mashiinkaqaab raajomishiinka lagu daydosaadaashaPythonrDuufaan